Amniga - Sabahionline.com
Hogaamiye sare oo al-Shabaab ah oo dawlada Soomaaliya isu soo dhiibay
2014-12-29 Madaxa sirdoonka al-Shabaab Sakariye Ismaaciil Axmed Hirsi, oo ka mid aha kuwa ka tirsan argagixisada al-Shabaab ee dawlada Maraykanku ay ilaa sannadkii 2012-kii baadi-goobaysay, ayaa hadda ku jira gacanta dawladda Soomaaliya.
Kenya oo adkeeysay ammaanka xilliga fasaxa
2014-12-22 Unugyo bilays ah ayaa loo diray magaalooyinka waaweeyn iyo meelaha rabshadaha ka dhacaan ee Kenya si loo ilaaliyo amniga dadweynaha inta ay ciidda u damaashaadayaan.
2014-12-16 Al-Shabaab waxay dhaawac gaarsiisay kaabayaashii degmada waxayna barakicisay degaankii, laakiiin tan iyo markii la qaaday xayiraaddii ay saartay magaalada, ayay noloshu caadigeedii ugu soo noqotay si tartiib tartiib ah.
2014-12-15 Dadka u ololeeynaya hinidise-sharciyeed la doonayo in wax looga baddalo 21 ka mida sharciyada amniga Kenya ayaa sheegaya in looga golleeyahay ilaalinta ammaanka dadweynaha, laakiin dadka duraya ayaa ka baqaya in ansixintiisu ay saameeyn xun ku yeelan doonto xuquuqda madaniga ah.
Hoggaamiyeyaasha diimeed oo ku boorriyay Kenyanka inay diimaha ka dhex abuuraan ixtiraam iyo dulqaad
2014-12-12 Muslimiinta iyo Masiixiyiintu waa inay ka taxaddaraan inaan lagu riixin colaad dhexdooda ah goor ay al-Shabaab tiigsaneeynso inay dagaal diimeed ka bilowdo Kenya, ayay culimadu ka digayaan.
2014-12-10 Kadib baddalaaddii madaxda sare ee ammaanka Kenya, ayaa Kenya waxa waajib ku ah in ay dajiso istiraatijiyad cusub oo lagu qiimaynayo khataraha argagixisada isla markaana wax looga qabto dhibaatooyinka ammaanka, ayay leeyihiin khubarada ka tala-bixisa ammaanka.
2014-12-05 Xukuumaddu waxaa waajib ku ah in ay sii waddo adkaynta ammaanka dekadaha Soomaaliya iyo meelaha xeebaha ah si ay gabi ahaanba u joojiso dhoofinta dhuxusha, taas oo ah mid ka mid ah daxkhliga ugu wayn ee al-Shabaab, sida ay leeyihiin u-kuur-galayaashu.
Saxaafadda Soomaaliya oo u midoowday la-dagaallanka xagjirnimada hubaysan
2014-12-03 Saxafiyiinta Soomaalida ayaa ballan-qaaday in ay adkaynayaan kaalinta ay ku leeyihiin la-dagaallanka faafitaanka afkaaraha colaadda xambaarsan ee ka dhexjira dhallinyarada isla markaana ay u ololayn doonaan nabad iyo xasillooni dalka ka hirgasha.
Mas'uuliyiinta iyo hoggaamiyayaasha diinta oo shaqaalaha dawladda ku boorrinaya in ay ku nagaadaan Mandheera
2014-12-02 Ka bixitaanka shaqaalaha dawladda ee Mandheera waxa uu saamayn taban ku yeelan doonaa bixinta adeegyada muhiimka ah ee gobolka waxana uu si taban raad ugu yeelan doonaa dagaalka lagula jiro argagixisanimada, ayay leeyihiin dadka arrimaha indhaha ku haya.
Kenyanka oo ka dibad-baxay amnixumada hoggaamiyayaashana ka dalbay tallaabo
2014-11-26 Boqolaal dibad-baxayaal ah ayaa isugu yimid Nairobi si ay ula xisaabtamaan hoggaamiyayaasha dalwadda kadib weerarkii dhawaa ee ay al-Shabaab ka fulisay Mandera iyo weerarro ka dhan ah haweenka oo ka dhacay Nairobi.
Madaxda Mandera oo ka digtay dhagarta al-Shabaab
2014-11-18 Hoggaamiyayaasha Mandera ayaa sheegaya in macluumaad isa soo taraya oo ay shacabka ka heleen uu muujinayo in al-Shabaab ay qorshaynayso weerarro ay Nairobi ku qaado.
Dadaalo dhaxdhaxaadin ah oo ka socda gobalka Galgaduud ee Soomaaliya
2014-11-11 Isku dhacyo ka dhashay biyaha iyo meelaha daaqsinta ah ayaa dhaliyay dhimasho iyo barakac ka dhacay gobalka dhaxe ee Soomaaliya usbuucyadii dhawaa.
Ammaanka aadka loo adkeeyay ee xeebaha Soomaaliya oo looga golleeyahay in lagu musallafiyo al-Shabaab
2014-11-07 Qaraarka Golaha Ammaanka Qaramada Midoobay ayaa xoojinaya farsamo lagu dhaqan-galinayo joojinta hubka sida sharci darrada ah lagu soo dajisto iyo dhuxusha lagu dhoofiyo ee lagu maalgaliyo kooxda argagixisada ah.
Dilalka loo gaystay bilayska Kenya oo abuuray baaqyo lagu doonayo iscasilaadda Lenku iyo Kimaiyo
2014-11-05 Qaar ka mida Kenyanka ayaa ku baaqaya in ragga u sarreeya amniga qaranka ay isaga tagaan xilalkooda kadib markii si xiriir ah loo laayay askar bilays ah iyo rayid.
Kenyanka oo dalbaya in degdeg loo dhaqan-galiyo warbixinta hay’adda la socodka bilayska ay ka soo saartay weerarradii Mpeketoni
2014-10-16 Jawaabihii uu bilaysku ka bixiyay weerarrada waxay ahaayeen kuwa “gaabis ah oo aan isku xirneeyn”, sida lagu sheegay warbixin kharaar, muwaadiniintuna waxay leeyihiin kuwii ku guul-darreeystay in ay joojiyaan weerarradaas waa in dacwad lagu soo oogaa.
Hawlgalada amaanka ee Kenya ee lagu beegsanayo al-Shabaab oo barakiciyay dadka dagan kaynta Boni
2014-10-07 Tan iyo August, ayaa 50 qoys oo reer Aweer ah laga barakaiciyay kaynta, taas oo ku khasabtay dadkaasi in ay ku tiirsanaadaan deeqda uga imaanaysa dadka dagan magaalooyinka u dhaw dhaw.
Ciidamada Soomaaliyeed oo gacanta ku dhigay Baraawe ka dib markay ka saareen al-Shabaab
2014-10-06 Magaalo-xeebeedda Baraawe ayaa ahayd halkii ugu dambaysay ee ay al-Shabaab awoodda ku lahayd Soomaaliya waxayna ahayd meel muhiim ah oo uu dakhliga ka soo gali jiray kooxda xagjirka ah.
Shacabka reer Muqdisho oo aan hadda ka baqeeyn inay si cad u dhaleeceeyaan al-Shabaab
2014-10-03 Markii ugu horraysay taniyo markii ay soo baxday al-Shabaab, ayay shacabka caasimaddu dareemayaan kalsooni ah inay dadka dhexdoda wax uga sheegi karaan kooxda iyo xadgudubyadeedii iyagoo aan ka baqeeyn in laga aarsado.
Magaalooyinkii laga xoreeyay al-Shabaab oo ay noloshu si tartiib ah ugu soo noqonayso
2014-09-19 Muwadiniinta ku soo noqonaya magaalooyinka la xoreeyay ayaa hadda xoriyad u haysta in ay sameeyaan waxa ay doonayaan, sida qabashada xafladaha arooska, daawashada telefishanka iyo isticmaalka taleefannada gacanta ee casriga ah - arrimahaas oo ay mamnuucday al-Shabaab.
Millatariga Kenya oo ka hawlgalaya baraha kontaroolka si looga hortago tahriibinta hubka iyo argagixisanimada
2014-09-16 Waxaa tallaabadan loola jeedaa in lagu xoojiyo joogitaanka bilayska ee baro kontarool oo badan oo ah waddooyinka loo maro Soomaaliya, iyadoo uu hal mas'uul sheegay in musuq-maasuqa ka dhex jira askarta bilayska uu yahay 'caqabadda u weyn ee haysata ammaanka'.
Hoggaamiyayaasha Afrika oo isku raacay in ay iska kaashadaan la-dagaallanka argagixisanimada
2014-09-03 Madaxda ciidamada ammaanka Afrika iyo madaxweynayaasha ayaa isku raacay in ay wadajir uga shaqeeyaan la-dagaallanka argagixisannimada iyo jariimada caalamiga ah intii ay socdeen kulanno xiriir ah oo ay marti-galisay Kenya.
Masiirka Godane oo aan la ogeeyn xilli uu Maraykanku qiimeeynayo duqeeyntii Shabeellaha Hoose
2014-09-02 Hoggaamiyaha al-Shabaab Axmed Godane ayaa la sheegay in uu ahaa bar-tilmaameedka ugu weyn ee weerarkii cirka Maraykanka uu ku qaaday Soomaaliya, iyada oo hoggaamiyayaasha millatarigu ka aamuseen halkii uu ku dambeeyay.
Shaqaalihii hore ee booliiska oo hawlgabka looga yeedhayo si ay Kenya uga caawiyaan amaan la'aanta taagan
2014-08-27 Askarta hawlgabka ahaa ayaa siinaya adeegyo hagid ah siin doona xubnaha cusub kana caawin doona ciidanka booliiska wanaajinta xidhiidhka ay la leeyihiin shacabka.
Caqabadaha horyaal ciidamada Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ee isku diyaarinaya weerarka soo socda ee al-Shabaab
2014-08-25 Iyada oo Hawlgallada Badweynta Hindiya laga yaabo in ay bilaabmaan bisha soo socota, ayaa ciidamada huwanta waxa looga baahan yahay in uu meel u yaal qorshe ay wax uga qabanayaan caqabado dhawr ah oo horyaala si dadaallada milatariga looga dhigo kuwo guul ku dhamaada.
Dagaallo culus oo ka dillaacay Muqdisho xilli ay ciidamada ammaanku ay hub-dhigid ku sameeynayaan hoggaamiye kooxeed
2014-08-15 Ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ayaa la dagaallamay hoggaamiye kooxeed maxalli ah iyada oo uu socdo olole hub-ka-dhigid ah, halkaana ku qabtay 20 xubnood oo ka tirsan malleeyshiyaadka lana wareegay kayd hub oo aad u badan.
Qabashada Kenya ee tuhmahaha al-Shabaab waxa ay muujinaysaa iskaashi sir-doon oo kala dhexeeya Soomaaliya
2014-08-13 Qabashada Kenya lagu qabtay ninka la rumeeysan yahay in uu xubin ka yahay al-Shabaab ee Xasan Xaaji Xanafi iyo wareejinta la qorsheeynayo in lagu wareejiyo Soomaaliya waxa ay muujinaysaa ahamiyadda ay leedahay in la wadaago xogaha sireed ee yaal dacallada soohdinta.
Xukuumadda Soomaaliya oo sii wadda ololaha ay hubka uga sifeeynayso Muqdisho
2014-08-12 Xukuumadda Soomaaliya ayaa qortay xeer ka mamnuucaya shacabka inay hub haystaan oo qofkii hub sharci darro ah lagu qabto ku xukumaya shan sano oo xadhig ah.
Kenya oo ka doodaysa hubaynta ilaalada ammaanka ee khaaska ah
2014-08-07 Ilaalada amnaanka ee khaaska ah ayaa codsiyadooda dib u soo celinaya si loogu oggolaado in ay hub qaataan, laakiinse sharci dajiyayaasha iyo qaar shacabka ka mid ah ayaa talaabadaas ka soo horjeeda, iyaga oo sheegaya in ay keeni karto ammaan daro kale.
Mas'uuliyiinta Kenya oo ka walwalsan in ay ku soo fidan colaadaha ka jira gudaha Itoobiya
2014-08-01 Bilayska ayaa xiray shan tuhmane ah oo looga shakiyay inay geysteen dilal is xixigay oo ka dhacay Gaarisa, iyagoo sheegay in ay ka walwalsan yihiin in dilalku ay la xidhiidhaan dhaqdhaqaaq gooni-goosad ah oo ku sugan Itoobiya.
Bandoowga cusub oo la dhalleeceeyay, ka dibna la khafiifiyay ka dib markii fasixii toddobaadka la weeraray Lamu iyo Mombasa
2014-07-21 Wax ka yar 24 saacadood ka dib markii la bilaabay, ayaa bandoow habeenkii illaa subixii ahaa ee Lamu lagu soo rogay ay khafiifiyeen ciidamada amniga si loogu oggolaado Muslimiinta inay masaajidyada ku cibaadeeystaan usbuuca ugu dambeeya ee Ramadaanka.
Dhexgalka al-Shabaab ee xukuumadda Soomaaliya oo kiciyay walaac cusub oo amniga ah
2014-07-15 Xukuumadda Soomaaliya ayay dhaliil xooggan ka soo gaadhay inaysan si buuxda u kala shaandheeyn dhammaan shaqaalaha jooga xarumaha dawladda ka dib markii qof al-Shabaab ka tirsan uu xagjiriintailla ka caawiyay inay galaan Villa Somalia.
Basaasiin u shaqeeyn jirtay bilayska Kenya oo isaga tagay adeegga iyagoo ka carooday mushaar la'aan
2014-06-27 Taliyayaasha bilayska Kenya ayaa sheegaya in iskaashiga muwaadiniinta uu ahamiyad weyn u leeyahay la-dagaallanka argagixisannimada, waxana ay ballan-qaadeen in ay si dhab ah u tixgalin doonaan dhammaan xogta ay helaan isla markaana ay xafidi doonaan sirta.
Shacabka oo farxad ka muujiyay dib-u-furidda bar-kontoroollada bilayska ee gobollada xeebta iyo waqooyiga bari ee Kenya
2014-06-25 La'aanta qalab wanaagsan iyo ciidan la'aan ayaa bilayska ku kalifay inay xidhaan wax ka badan darsin baro-kontorool oo dayacnaa, laakiin korodhka askarta cusub ee la qoray ayaa u oggolaanaysa madaxda inay xoojiyaan goldaloollada ammaanka.
Dambiyada lagu galo internetka oo ku badanaya Kenya
2014-06-24 Warbixin dhowaan soo baxday ayaa sheegaysa in dambiileyaasha gala jariimooyinka internetka ay isticmaalaan xeelado aad u sarreeya oo si taxaddar leh loo soo dajiyay si ay galaangal ugu helaan shabakadaha oo ay u xadaan macluumaadka dadka internetka isticmaala.
Ammaanka Muqdisho oo la adkeeyay ka hor Ramadaanka
2014-06-18 Al-Shabaab oo lagu yaqaano in ay Muqdisho ku qaadaan weerarro lagu hoobto xiliga Ramadaanka, ayaa diyaarinaysa in ay geeysato weerarro kuwii hore la mida sannadkan, sida uu sheegayo afhayeenka booliiska Soomaaliya.
Waxtarka tallaabooyinka lagu hagaajinayo ammaanka Jabuuti oo su'aalo ka taagan yihiin
2014-06-17 Inkasta oo ay muwaadiniinta qaarkood sheegayaan in joogista bilayska iyo tallaabooyinka ammaanku ay niyad-dhis yihiin, qaar kale ayaa sheegaya in sharciyada qaar ka mida, sida mamnuucidda indha-shareerka, laga yaabo inay xaaladda sii xumeeynayaan.
Ciidamada huwanta ah oo ku sii durkay Bakool kana qaaday jidgooyooyinkii al-Shabaab
2014-06-13 Shacabka ku nool Bakool ayaa soo dhoweeyay furitaanka waddooyinkii go'naa, laakiin waxay sheegeen in muwaadiniin badan ay noloshoodu wali halis ku jirto.
Soomaalida laga xoreeyay al-Shabaab oo markii ugu horreeysay tan iyo 2002 daawanaya Koobka Adduunka
2014-06-12 Iyagoo aan hadda ku hoos nooleeyn xannibaadda ay al-Shabaab saartay kubadda cagta, ayaa shacabka deggan meelaha la xoreeyay ay qorsheeynayaan inay malaayiin kubadda xiiseeya kala qeyb qaataan daawashada tartanka sannadkan.
Milkiileyaasha iyo rakaabka basaska Kenya oo soo dhoweeyay jaangooyooyinka ammaan ee kor loo qaaday
2014-05-28 Milkiileyaasha basaska, oo markii hore lagu dhaleeceeynayay inaysan dan ka galin amniga rakaabka, ayaa soo dhoweeynaya amar xukuumadeed oo ah in la baadho dhammaan rakaabka iyo boorsooyinka ka dib markii weerarro isdaba jooga lagu qaaday basaska.
Dad ka badbaaday Westgate oo ku soo noqday ganacsigii kuna dhiirrinaya dadka kale inay ka guuleystaan niyad-jabka
2014-05-02 Ka dib markii ay shaqooyinkoodii ku waayeen weerarkii argagixisada ee suuqa Westgate, ayay siddeed qof oo saaxiib ah waxay is wadajir ah u bilaabeen ganacsigooda khaaska ah iyaga isticmaalaya deyn ay ka qaateen bangi iyo niyad adayg badan.
Ololaha diiwaangalinta calaamadaha jismiyeed ee Kenya oo dhaliyay walwal ku saabsan dhinaca hufnaanta
2014-04-24 Hindisaha cusub ee dawladda ayaa ah isku day lagu diiwaan galinayo dhamaan shacabka iyaga oo loo samaynayo kaarar aqoonsi oo calaamadaha jismiyeed ku saleeysan dhamaadka sanadkan, kaas oo ah qorshe hammi wayn oo dadka qaarkii ay su'aal ka keeneen sharci ahaantiisa.
Milkiileyaasha guryaha Kenya iyo dadka ka kireysta oo su'aalo ka keenay amarka cusub ee amniga
2014-04-21 Xukuumadda ayaa ku amartay milkiileyaasha guryaha inay dadka ka ijaarta ka soo ururiyaan xog, laakiin dadka guryaha kireysta ayaa walaac ka muujiyay in amarku uu ku xadgudbayo xuquuqdooda gaarka ah.
Bilayska Kenya oo 'wax yar oo qaddarin ah' ku doonaya waxa ay hureen
2014-04-11 Askartu waxay sheegeen inkastoo uu mushaarkooda yar yahay oo xaalado adag ay ku shaqeeyaan, inay xubnaha ciidanka intooda badan ka go'an tahay inay u shaqeeyaan oo badbaadiyaan dalka.
Qabqabashada ballaaran ee Eastleigh oo dhalisay caro dadweyne
2014-04-09 Bilayska ayaa ku qabtay xaafadda ay u badan yihiin qowmiyadda Soomaalida ee Nairobi in ka badan 4,000 oo qof, laakiin dadka degaanku waxay leeyihiin howlgalka ammaan waxa lagu cabsi-galinayaa xad-gudubyona loogu gaysanayaa dadka aan waxba galabsan.
Cabsi ka beerantay in laga yaabo inay al-Shabaab isku dhex qariyaan shacabka
2014-04-07 Xubnaha al-Shabaab oo ka soo cararaya meelaha dhowaan la xoreeyay waxaa laga yaabaa inay is-qarinayaan oo waqtigooda suganayaan, ayay leeyihiin mas'uuliyiintu, waxaana qoysaska laga codsanayaa in aysan soo dhoweeyn ama aysan qarin.
Kadib markii is-dhex-yaac ammaan oo ka jira Mombasa uu bannaanka u soo saaray karti-xumada ka jirta bilayska ayuu Kenyatta ballan-qaaday dib-u-habeeyn ballaaran
2014-03-28 Indha-indheeyayaasha ayaa leh bilayska waxa ka maqan xirfadaha asaasiga ah ee lagu aruuriyo xogaha sirta ah kadib markii ay ku fashilmeen in ay ogaadaan in gaari u xareeysaan ku dhawaad toddobaad ay ka buuxeen walxaha qarxa.
Xukuumadda Soomaaliya iyo ASWJ oo isku khilaafsan in maleeshiyada lagu daro XDS
2014-03-27 Xukuumaddu waxay rabtaa in Ahlu Sunna wal Jamaaca lagu daro ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed, laakiin masuul sare oo ka tirsan ASWJ ka tirsan ayaa ku eedeeyay xukuumadda inaysan ka dhabeeyn heshiis hore.
Dadka reer Buulo Burde oo soo noqonaya sannado kadib markii ay ka carareen xukunka arxan-darrada ah ee al-Shabaab
2014-03-26 Kadib sannado ay ahaayeen dibad-joog kuna noolaayeen cabsi, ayay dadka reer Buulo Burde doonayaan in ay dib u dhisaan guryahooda iyo ganacsigooda kadib markii ay ciidamada huwantu al-Shabaab ka xoreeyeen magaalada.
Taargooyin aan la baddali karin oo la rabo in jariimooyinka Kenya ka dhaca lagu yareeyo
2014-03-26 Taargooyinka cusub ayaa la filayaa inay hagaajiyaan amniga baabuurta oo ay kabaan shaqada hay'adaha sharciga ilaaliya, marka lagu daro inay yareeynayaan lacagta ay caymiska ku bixiyaan milkiilayaasha.
Wasiirka Difaaca Soomaaliya: Xukuumadda waxaa ka go’an in ay dib u dhisto ciidanka
2014-03-25 Dib-u-dhiska ciidanka qaranku habeen iyo maalin kaliya kuma dhammaan doono, laakiin Wasiirka Difaaca Soomaaliya Maxamed Sheekh Xasan Xaamud waxa uu sheegayaa in ay xukuumaddu tallaabooyin u qaadayso sidii qaab munaasib ah loogu soo dhisi lahaa darajooyinkii ciidanka.
Soomaalida ku nool aagagga la xoreeyay oo muujinaya rajo xilli ay dhibaato ka haysato dib-u-dhiska al-Shabaab dabadeed
2014-03-21 Dadka degaanka ayaa sheegaya in ay u heellan yihiin dib-u-dhiska noloshooda kadib sannado ay ku hoos noolaayeen xukunka cadaadiska ah ee al-Shabaab, hase yeeshee horumarka ayaa gaabis ah waxana ragaadiyay burburka ay xagjiriintu u gaysteen kaabayaasha.
Ciidamada Soomaaliya iyo kuwa AMISOM oo si wadajir ah uga wadashaqaynaya aagagga laga xoreeyay al-Shabaab
2014-03-20 AMISOM ayaa ka shaqaynaysa in ay gargaar bini'aadannimo gaarsiiso dadka ku sugan aagagga la xoreeyay, halka ay xukuumadda Soomaaliyana ay hoggaaminayso howlaha kabashada iyo xasilinta ee saaritaanka al-Shabaab kadib.
Dhaqanka laaluushidda taraafikada oo halis ammaan ku ah Muqdisho
2014-03-19 Si uunan waqti uga lumin, ayay darawallada waxa ay laaluushaan taraafikada taagan baraha kontoroolka ee magaalada caasimadda ah, haseyeeshee qaar ka mida dadka deegaanka ayaa ka walwalsan in ay sidoo kale sameeyaan dadka wata ulajeeddooyinka xunxun.
Rabitaanka duqa Muqdisho uu ku doonayo in uu si kalinimo ah gacanta ugu qabto ammaanka Banaadir oo abuuray welwel
2014-03-12 Duqa cusub ee caasimadda ayaa doonaya in dhammaan hay'adaha ammaanka ee gobolka la hoos keeno hoggaankiisa, haseyeeshee khubarada ayaa ka digaya in tallaabada caynkaa ah laga dhaxli karo khataro badan.
Soomaaliya oo caqabado xoog leh ka ka waajahayaan xoreeynta aagagga ay ka taliso al-Shabaab
2014-03-04 Ciidada dawlada iyo kuwa huwanta ayaa ballan qaaday in ay al-Shabaab tirtirayaan sannadka 2014-ka, laakiinse falanqeeyayaasha ayaa sheegaya in loo bahaan yahay qorshe ku wajahan mustaqbalka fog ah si loo hubiyo helitaanka maamul shaqeeyn kara kadib xoreeynta.
Sharci-dajiyayaasha Kenya oo ka doodaya halista ka iman karta ardayda aan diiwaan-gashaneeyn
2014-03-03 Warbixin ka soo baxday baarlamaanka ayaa ku doodeeysa in carruurta Soomaalidu ay dhalashada ku helaan shahaadooyinka dugsiyada, laakiin qaar ka tirsan xildhibaannada ayaa dood ka keenay nuxurka warbixinta su'aalana ka keenay khatarta ku maldahan.
Ciidamada AMISOM oo lagu dhaliilay weerarkii Villa Soomaaliya
2014-02-28 Waxa bannaanka u soo baxay eedeeymo ka dhan ah ciidamada Howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya kuwaas oo ku aaddan sidii ay ugu fashilmeen in ay caabbiyaan weerarkii indha-adayga ahaa ee ay al-Shabaab ku soo qaadday xarunta madaxtooyada toddobaadkii hore.
Ciidamada dowladda oo laga howlgaliyay degmada Huriwaa si ay u xakameeyaan khatarta al-Shabaab
2014-02-27 Ayadoo ay jirto cabsi ah in al-Shabaab ay qabsan karto degmada Huriwaa, ayaa qoysaska qaarkood ay u carareen xaafadaha u dhow ka dibna dib ugu soo laabteen ka dib markii ay halkaa gaareen ciidamada dowladda.
Barnaamijka ammaan ee Machakos oo lagu dabakhayo gobollada Kenya
2014-02-25 Gobolka ayaa isticmaalaya 120 gaari oo cusub oo ah nooca bilaysku ku wareego, qalab isgaarsiineed iyo xarun wicitaan si loo wanaajiyo muddada ay bilayska ku qaadato in uu uga soo jawaabo dhacdooyinka ammaan isla markaana looga hortago jariimada.
Taliyaha Ciidamada Qaranka Soomaaliya: Dib-u-habaynta ciidanku wakhti ayay qaadan doontaa
2014-02-20 Millatarigu ma haysto hub ku filan ama isbitaallo isaga gaar ah, laakiin ciidamada Soomaalida guulo ayay ka gaarayaan dagaalka ay kula jiraan al-Shabaab, ayuu yiri Janaraal Daahir Adan Cilmi.
Hadallada kulkul oo kulannada diimaha laga jeediyo oo walaac ka dhaliyay Kenya
2014-02-17 Madaxda Muslimiinta iyo kuwa Masiixiyiinta ayaa bilayska la wadaaga walwalka ay ka qabaan in khudbadaha sida caamka ah loo jeediyo oo daandaansiga ah ay sii kordhin karaan xiisadaha iyo rabshadaha diimeed, waxayna isku afgarteen in ay ku wacdiyaan muhiimadda midnimadu ay leedahay.
Ciidamada Itoobiya oo Galgaduud gaadhay iyada oo AMISOM ay wado weerar ka dhan ah al-Shabaab
2014-02-14 Shacabka ayaa sheegaya in ay soo dhawaynayaan hawlgallada al-Shabaab lagaga saarayo degmooyinka Ceel Dheer, Galhareeri iyo Cell Buur, laakiinse waxay ka digeen in taxadar la sameeyo si loo yareeyo dhimashada shacabka.
Mas'uuliyiinta Manddheera oo beeniyay eedaymaha ah in al-Shabaab ka taliso magaalada
2014-02-11 Iyada oo uu barlamaanku isu diyaarinayo in uu ka hadlo warbixin dhiillo ku ah xaaladda ammaan ee Mandheera, ayay mas'uuliyiinta maxalliga ahi waxay sheegayaan in dhibaato u gaar ah ay ka haysato soohdimaha ay Kenya la leedahay Soomaaliya iyo Itoobiya.
Ciidamadii Soomaaliya ee shaqada laga caydhiyay iyo taliyaha ciidanka oo eedaymo is waydaarsaday
2014-02-11 Todobadii boqol ee askari ee shaqada laga caydhiyay ayaa sheegaya in ay ciidanka ku leeyiniin mushaaraad bilo ah, iyada oo taliyaha sare ee ciidankuna uu sheegayo in ay ahaayeen askar aan shaqo haynin oo xoolaha dawladda bilaash ku qaata.
Afhayeenka AMISOM: Sannadkan isbaddal weyn ka fisha dagaalka lagula jiro al-Shabaab
2014-02-07 Waraysi uu siiyay Sabahi, ayuu Korneeyl Ali Aden Hamud waxa uu ka hadlay guulihii hore iyo caqabadaha ku soo aaddan, sida qalab la'aan iyo xirfad la'aan haysata askarta Soomaalida.
Dadka reer Muqdisho oo shaki ka muujiyay qorshaha ammaanka kadib laba habeen oo qaraxyo dhaceen
2014-02-05 Askarta bilayska ayaa lagu arki karaa iyaga oo gaaf wareegaya magaalada xilli walba, laakiin dadka deegaanku waxa ay is waydiinayaan imisa ayuu sii jiri karaa amnigaa iska kooban, gaar ahaan markii qaraxyo is xigxiga gilgileen caasimadda.
Ciidama ammaanka Kenya oo masjid xoog ku galay kadib iska horimaad dhiig ku daatay
2014-02-03 Masjidka ayaa la sheegay in loo isticmaali jiray in dhallinyarada looga qoro kooxaha jihaadiyiinta ah, laakiin dad badan ayaa kudoodaya in jawaabta la bixiyay uu khasaaraheeda ka badan yahay faa'iidada laga gaaray.
Muqdisho oo laamiyada loo sameeyay magacyo cusub, guryahana lambarro si kor loogu qaado ammaanka iyo sahlanaanta
2014-01-30 Maamulka Banaadir ayaa doonaya in sannad gudihii ku calaamadiyo waddo walba iyo guri walba oo ku yaal Muqdisho, kaas oo ah qorshe ay mas'uuliyiintu qirayaan in ay adagtahay si loo xaqiijiyo.
Xarunta waraaqaha aqoonsiga Muqdisho oo codsiyadu xad dhaafiyeen
2014-01-22 In ka badan 500 oo muwaadiniin ah ayaa maalin walba fayl ku jira si ay u dalbadaan ama u qaataan waraaqda cusub ee aqoonsiga waddanka, laakiin xarunta kaliya ee magaalada ee waraaqaha aqoonsiga bixisa ayaan dalabka la jaan qaadi karin.
Sirdoon dhinaca ciidamada Soomaaliya oo sababy weerar cirka oo lagu hoobtay oo ay KDF ku qaaday hogaamiyaasha al-Shabaab
2014-01-21 Weerar cir, oo dilay ugu yaraan dilay 30 ka tirsan xagjiriinta al-Shabaab ah, ayaa si aad ah u sigay hogaamiyaha kooxda ugu sareeya, Axmed Cabdi Godane.
Gobolka Samburu oo isu diyaarinaya hawlgal weyn oo hub ka dhigis ah
2014-01-20 Ciidamada ammaanka ayaa hawlgal hub ka dhigis ah ka wada Gobolka Samburu ka dib markii 42 askari oo bilays ah la dilay hubkoodiina lagu xaday weerar gaadmo ah oo lagu qaaday dhammaadkii 2012-kii.
Khilaafka ka jira Koonfurta Suudan oo Bariga Africa ka abuuraya walaac xagga dhaqaalaha iyo amniga ah
2014-01-14 Madaxda Kenya ayaa ka walwalsan waxa ka iman kara kumanaanka qaxootiga ah oo ku soo qulqulaya xuduudaha dalka.
Kenya oo adkaynaysa sharciga gaadiidka si ay u xakamayso shilalka booyadaha gaaska wada
2014-01-08 Madaxda ayaa sheegaya in tababarka cusub iyo waxyaabaha darawalada laga doonayo ay yarayn doonaan shilalka khatarta ah ee booyadaha gaaska wada kana dhigi doonaan dhoofinta batroolka mid ammaan ah.
Dagaallo qabiil oo halis ah ayaa Kenya ku noqday caqabado ammaan
2013-12-30 Dagaallo soo noqnoqda oo u dhexeeya bulshooyinka Kenya qaar ka mida ayaa dhaqaale aad loogu baahan yahay ah ka weecinaya khataraha kale ee ammaan ee hadda taagan sida la-dagaallanka al-Shabaab, masuuliyiinta xukuumadda ayaa sidaas leh.
Booliiska oo adkeeyay ammaanka Zanzibar bilawga ciidda Masiixiga iyo xilliga dalxiisayaasha
2013-12-24 Wali waxa jirta cabsi badan kadib markii weerarro xiriir ah lala beegsaday hoggaamiyayaasha diinta iyo dalxiisayaasha shisheeye, hase yeeshee mas'uuliyiinta ayaa sheegaya in la diyaariyay qorshayaal looga hortagayo khataraha ammaanka xilliga lagu jiro fasaxyada.
Taliska cusub ee millatariga oo kiciyay muran ku saabsan doorka Ciidamada Difaaca Kenya
2013-12-18 Taliska Magaalaweynta Nairobi wuxuu ka shaqayn doonaa khataraha cusub ee amniga sida argaggixisada, laakiin dadka qaar ayaa ka walaacsan in la wareegista millatariga ee waajibaadka booliisku uusan ahayn hab wanaagsan.
Dadka ajnabiga ah oon mar dambe laga reebi doonin baadhitaannada Muqdisho
2013-12-17 Dadka ajaanibta ah, oo barigii hore aan la marsiin jirin baadhitaannada ammaanka, ayaa hadda loo baadhi doonaa sida muwaadiniinta Soomaaliyeed loo baadho markay booqdaan hay'adaha dawladda.
Ciidamada gobolka Baay oo banneeyay jidgooyooyin al-Shabaab dhigtay
2013-12-13 Hawgalka millatari ee al-Shabaab looga kicinayo waddada u dhexeeya Awdiinle iyo Qansax Dheere ayaa yimid laba bilood kadib markii ay xagjiriintu ay go'doomiyeen aaggaas.
Cibaadeeystayaasha Mombasa oo ka walaacsan in la wareegidda masaajidyada ay horseedi donto amni darro baahsan
2013-12-11 Bilayska ayaa sheegay ayaa ilaalo ka haya masaajidyada aagga si loo hubiyo in la wareegid is daba taxan oo dhowaan ay sameeyeen dhallinyarada degaanka aysan ahayn hawl ay fulinayaan 'wadaaddo iskood u shaqeeysanaya oo xagjiriin ah'.
Xal waara oo laga gaaro dagaallada ka dhex socda Turkana iyo Pokot oo aan wali la gaarin
2013-12-05 Khilaafka ka dhex jira labada beelood ee dagaallamaya ayaa sii socda inkasta oo ay jiraan dadaallo ay wadaan odayaasha dhaqanka ee deegaanka iyo ciidamada ammaanka Kenya si loo xakameeyo colaadda loona gaaro xal waara.
Xoola-dhaqatada Hiiraan oo ka dagaallamaya boobka al-Shabaab
2013-12-04 Xoola-dhaqatada ayaa weeraray xagjiriinta al-Shabaab ee dhacay xoolo badan, waxayna wadaan is hubeeyn si ay u galaan dagaallo kale oo dheeraad ah.
Su'aalo muhiim oo aan wali laga jawaabin laba bilood kadib weerarkii Westgate
2013-12-03 Aamusnida dawladda Kenya ee arimaha muhiimka ah ee la xidhiidha weearkii al-Shabaab ayaa dhaliyay kutiri kuteen ah in madaxdu ay si ula kac ah badhitaanka dib ugu dhigayaan.
Maamulka Dhuusamareeb oo mamnuucay baabuurta muraayadaha madoow
2013-11-29 Dadka deegaanka ayaa soo dhaweeyay mamnuucidda cusub waxayna xukuumadda federaalka ka dalbadeen in ay taageero dheeri ah ku bixiso tallaabooyin kale oo ammaan oo taa la mida xilli bartamaha looga jiro jabinta al-Shabaab.
Madaxda Dhuusamareeb oo qaabilay dad ka soo goostay al-Shabaab
2013-11-28 Kooxaha bulshada rayadka ayaa gacan ka gaysanaya samaynta xero weyn oo dhaqan-celis oo loo samaynayo xagjiriinta al-Shabaab oo si isa soo taraysa uga soo goosanaya kooxda.
Maamulka Shabeelada Dhexe oo wax ka qabanaya khilaafka qabiilka, iyo xabbad joojin la sameeyey
2013-11-22 Madax goboleedka ayaa raadinaya heshiis nabadeed oo daa'im ah kadib markii dagaalkii dhex maray qabiilada Abgaal iyo Shidle ay ku dhinteen ugu yaraan 20 qof boqolaal qoysna ay ku bara kaceen.
Tansaaniya oo indhaha ku haysa ganacsi suurtagali kara haddii heshiiska DRC-M23 uu ammaan ka dhaliyo gobolka
2013-11-21 Wadahadaladii u dhexeeyay Jamhuuriyadda Dimuquraadiga Kongo iyo Dhaqdhaqaaqa March 23 ayaa burburay, laakiin madaxda ayaa sheegaya in heshiis halkaas ka dhasha uu ganacsi iyo ammaan u herseedi karo gobolka.
Khadka dib loo soo nooleeyay ee 888 ee ka jawaabidda xaaladaha degdegga ah oo ka qayb qaatay adeegyada ammaanka ee soo kordhaya ee Muqdisho
2013-11-14 Muwaadiniinta ayaa hadda wici kara 888 si ay bilayska ugu wargaliyaan dambiyada waaweeyn ee dhacaya. Waxaa dhawaan la sugayaa in lagu soo daro laba khad oo cusub oo loogu talagalay in lagu soo gudbiyo shilalka waddooyinka iyo dabka.
Caqabadaha hortaagan dib-u-dhiska Ciidamo Qaran Soomaaliyeed oo midaysan
2013-10-24 Ciidan mideeysan, oo ka maran dagaallo dhex mara askartiisa kala qaybsan, ayaa ah arrin aad muhiim ugu ah ammaanka Soomaaliya ee mustaqbalka fog.
Warbixin sirdoonka Kenyaanka ah oo caddaynaysa walwalka joogitaanka al-Shabaab ee Gaarisa
2013-10-23 Sida ay sheegayso warbixin si hoose loo sii daayay oo ay soo saartay Khidmada Sirdoonka Qaranka Kenya, ayaa hawlwadeeno la soo xulay oo al-Shabaab ah ay u doorteen Goblka Gaarisa in uu yahay "saldhigga ugu haboon hawlgalkooda".
Kenya oo doonaysa in ay jariimada iyo argaggixisannimada uga hortagto qorshaha dadku kula shaqeeynayo bilayska
2013-10-22 Xukuumadda ayaa doonaysa in ay hannaanka uga hirgaliso dalka oo dhan kama dambeeys October, laakiin waxaa jira xoogaa welwel ah oo ku aaddan in ay taasi jabiso khusuusiyaadka dadka isla markaana ay dhiirri-galiso dhaqanka basaasnimada.
Reer Muqdisho oo u dabaal-dagay bilowga Ciidul Adxada
2013-10-16 Kadib markii ay salaadda soo tukadeen aroortii, ayay Soomaalidu ugu dabaaldageen maalinta koowaad ee Ciidda booqashooyin ay ku tageen Xeebta Liido iyo meelo kale oo caan ah, iyo saddaqo ay siinayeen saboolka.
Codsiyo isa soo taraya oo ah kordhinta awoodda Hay'adda Sirdoonka Qaranka Kenya
2013-10-14 Hay'adda sirdoonka ee waddanka ugu wayn ayaa waxaa curyaamiyay sharciyo ka reebaya in ay si toos ah ula falgasho siraha la xidhiidha weerarrada argaggixisada ee laga yaabo in ay dhacaan, madaxda iyo khubarada ayaa sidaas leh.
Wadaagsiga macluumaadka sirdoonka ayaa furo u ah dagaalka ka dhanka ah argaggixisada ee Bariga Afrika
2013-10-11 Kenya iyo Soomaaliya waa in ay wadaagaan cilmiga -- sida tababarka bilayska, falanqaynta macluumaadka sirdoonka iyo wararka laga hayo argaggixisada -- si uu dagaalka ka dhanka ah al-Shabaab u guulaysto.
Hoggaamiyayaal ugu baaqay Keenyaanka in hoos loo dhigo hurinta colaadaha diineed
2013-10-09 Kadib wax yar weerarkii al-Shabaab ee Westgate, dilkii dadka gaariga watay ay Mombasa ku dileen hoggaamiyaha Muslinka ayaa laga yaabaa in uu dib u cesho nabadoonaantii dhex tiil diimaha iyo kalsoonidii ay dadku ku qabeen bilayska.
Tansaaniya oo adkaysay ammaanka kadib weerarkii Westgate ee Nairobi
2013-10-04 Taageerayaasha xiiseeya kubadda cagta waxa ay mari doonaan baaritaannada lagu eego qalabka ka samaysan birta iyada oo milkiilayaasha ganacsigana lagu dhiirri-galiyay in ay xarumahooda ku rakibaan kameradaha ammaanka taas oo ah isku day lagu xoojinayo ammaanka.
Afhayeenka AMISOM: Ciidamo dheeri ah iyo gargaar ayaa looga baahan yahay Soomaaliya
2013-10-02 Korneeyl Cali Aadan Xaamud ayaa ammaanay horumarka laga sameeyay Soomaaliya, laakiin waxa uu sheegay in dalku wali u baahan yahay gargaar dheeri ah iyo taageerada caalamka si dib loogu soo dhiso ciidamadiisa ammaanka.
Xidhitaanka fadhiisimaha booliiska ee Mombasa oo dhaliyay walwal dhinaca ammaanka ah
2013-09-17 Cabsida argaggixisada ayaa keentay in madaxda Gobolka Mombasa ay xidhaan xarumaha booliiska ee aan sida fiican u qalabaysnayn illaa iyo xal waara oo dhinaca shaqaalaha ah looga helayo.
Soomaaliya oo dib usoo noolaysay qeyb ciidan taasoo qeyb ka ah xoojinta ammaanka
2013-09-12 Qeybta 21-aad, oo maqneyd in ka badan 20 sano, ayaa soo laabanaysa, iyada oo daboolaysa baahiyaha dagaalka al-Shabaab lagula jiro ee seddex gobol oo ku yaal bartamaha Soomaaliya.
Kenya oo khatar soo koraysa kaga imanayso burcadda
2013-09-09 Daraasad baa soo bandhigtay in dhaqdhaqaaqa burcadda ee Kenya uu sameeynayo koror dareen xambaarsan, iyada oo kooxaha jariimada qaarkood ay isticmaalayaan magacyada ururrro argaggixiso sida al-Qaacida iyo Taliban si ay dadka u cabsi galiyaan.
Mareeg Garruha leeyahay oo uu baaritaan ugu socdo doorkii uu ku lahaa dagaallo beeleedyo ka dhacay Kenya
2013-09-05 Garreonline.com ayaa dafirtay eedeymo ah in ay tahay aalad diycaayadeed oo online ah u hurisa dagaallada beelaha Garre iyo Dagoodiye.
Xasilooni ay cabsi ku jirto oo ku soo noqotay Mooyaale ka dib dagaallo qabiill oo dhibaato gaystay
2013-09-03 Natiijadii doorashadii guud ee Kenya ee 4-tii March, oo ay beesha Gabra ku heleen inta badan kuraastii gobolka u sarreeysay, ayaa colaad ku beertay beesha Booranaha.
Xaalada amaanka Muqdisho oo su'aalo la iska waydiiyay
2013-08-28 In kasta oo ay jiraan sheegasho ah ka soo raynta xaaladda ammaan ee Muqdisho, ayaa hadana xukuumadda Soomaaliya waxa ay dhalleecayni uga timid weerarradii dhawaa ee lagu qaaday shaqaalaha gargaarka iyo dadka ajaanibta ah.
Beeralayda Soomaalida oo ka xoroobay baadda al-Shabaab
2013-08-27 Al-Shabaab ayaa beeralayda gobolka Shabeelaha Hoose ku qasbay in ay canshuur ka bixiyaan dalagooda ayna ka baxaan qeybo kamid ah beerahooda. Kadib markii gobolka laga saaray [al-Shabaab], ayaa beeraha ay mar kale kor u kaceen.
Shacabka Shabeelaha Hoose oo ciidamada ammaanka ka caawinaya ka hortaga weerarrada al-Shabaab
2013-08-22 Dadka deegaanka ayaa sheegay in ay ka go'antahay in ay kala shaaqeeyaan dawladda federaalka ee Soomaaliya sugidda ammaanka beelaha aaggooda ku sugan iyo in ay horjoogsadaan dabinnada al-Shabaab.
Bixitaanka hay'adda gargaarka oo soo saarey tayo darrada Soomaaliya ee dhinacyada ammaanka iyo garsoorka
2013-08-21 In kasta oo hoggaamiyayaasha siyaasadda iyo kuwa bulshadu ay rajaynayaan in Dhakhaatiirta aan Xuduudda Lahayn lagu qancin karo in ay Soomaaliya ku soo noqdaan, ayay ammaanka iyo garsoorka waddanku wali khalkhalsan yihiin.
Walaac sii kordhaya oo ku aaddan diyaar ahaanshaha ciidamada ammaanka Soomaaliya
2013-08-15 Indha indheeyayaasha ayaa sheegaya in xukuumadda ay u baahantahay in ay ku tallaabsato dadaalo lagu horumarinayo ciidamada ammaanka ee dalka kadib markii weeraro badan oo iska daba dhac ah oo lagu hoobtay oo ay xagjiriintu fuliyeen.
Kenya, Soomaaaliya iyo jahawareerka ka jira maamulidda Kismaayo
2013-08-14 Dad badan ayaa is waydiinaya ujeedada Kenya ee Jubbaland, balse hoggaamin la'aanta mas'uuliyiinta Soomaalida ee ku aaddan arrimo muhiim ah ayaa xaaladda kaga sii daraya.
Hawlgal bilayska Kenya ah oo beegsadey burcadda Islii
2013-08-13 Bilayska Nairobi ayaa xidhay in ka badan 500 oo xuubnood oo ah burcadda kooxaha Superpower iyo Sitaki Kujua taniyo dhammaadkii 2012-kii, balse waxay sheegeen inay u baahan yihiin caawinaadda jaaliyadda Soomaaliyeed si ay u kala furfuraan kooxaha.
Muslimiinta Bariga Afrika oo khilaafkoodii dhinac iska dhigay si ay Ciidul Fitriga ugu dabaal dagaan
2013-08-09 Caruurta ayaa ku xashaashay dhar cusub iyo waxyaabaha lagu ciyaaro, dariskuna waxa uu midiba kan kale ku casumay qado, halka ay madaxdu faafinayeen farriimo ku saabsan nabadda iyo midnimada si loogu dabaaldago dhammaadkii Ramadaanka.
Muqdisho oo si nabad ah ku ciidday Ciidul Fidriga
2013-08-09 Digniino sii kordhaaya oo ammaanka ah oo ka jiray guud ahaan Bariga Afrika iyo hanjabaado weeraro ah oo ka imanayay al-Shabaab maalmihii ugu dambaysay ee Ramaddaan ayaa qaar kamid ah muwaddiniinta aysan la fududeyn arrintan iyada oo Ciidul Fidriga lagu sii dhawaynayay.
Gobolka Kenya ee Kwale oo waratada ka mamnuucay xeebaha
2013-07-30 Dawladda gobolka ayaa hadda ka doonaysa waratada in ay iska diiwaan galiyaan masuuliyiinta maxalliga ah kuna koobaan hawlahooda ganacsi goobaha loo qoondeeyay ee xeebta ka baxsan.
Qabaa'illadii ku dagaallamayay Kenya oo ku baaqay xabbad joojin bisha Ramadaan aawadeed
2013-07-18 Qabaa'ilka muransan ee Gare iyo Dagoodiye ayaa isku waafaqay in ay si wadajir ah u afuraan, iyada oo aysan jirin wax dagaal ah oo lasoo wariyay tan iyo marki ay bishu bilaabatay.
Dadka daggan Muqdisho iyo ciidamada oo ammaanka ilaalinaya bisha Ramaddaan
2013-07-15 Unugyo dheeri ah oo ka tirsan askarta Soomaaliya ayaa gaaf wareegaya waddooyinka Muqdisho kadib markii al-Shabaab ay wacad ku martay in ay kordhinayso rabshadaha inta lagu jiro bisha barakaysan.
Ammaanka soo hagaagaya ee Muqdisho oo milkiiliyaasha guryaha u horseeday baraare
2013-07-04 Guulaha laga gaaray ammaanka ayaa dadka dib ugu soo celiyay caasimadda Soomaaliya, arintaas oo soo noolaysay suuqa guryha una saamaxday milkiilayaasha guryaha in ay ka faa'iidaan arintaas.
2013-06-26 Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa uga digay qabaa'ilka ku dagaallamaya gobollada Wajeer iyo Mandheera in ay dhigaan hubkooda ama ay waajihidoonaan weerar uga yimaada ciidamada ammaanka dawladda.
Xaumo gaar ah ayaa loo baahanyahay si dhaqan-celin wax tar ah loogu sameeyo kuwa ka soo baxa al-Shabaab
2013-06-20 Sida ay sheegaayaan saraakiil ka tirsan militariga Jabuuti, xarumo dhaqan-celin oo gaar ah ayaa loo baahanyahay si loo horumariyo hanaanka kuwa al-Shabaab kasoo baxa dib loogu milayo militariga iyo nolosha rayidka.
2013-06-14 Taksi loo gacan haatiyo ayaan mid aamin ah ka eheyn caasimadda Soomaaliya. Hadda, laba shirkadood oo taksi oo cusub ayaa ka faaiidaysanaya ammaanka soo hagaagaya iyaga oo aad ugu dadaalaya in ay khidmooyinkooda habeeyaan.
Baddalida guddoomiyaha Gobolka Gaarisa oo soo jiidatay fiiro gaar ah
2013-06-10 Xawliga ay mas'uuliyiinta sare uga tagayaan jagooyinkooda ayaa caqabada ku ah dadaalka loogu jiro la dagaalanka argaggixisada iyo dhisidda xiriir wanaagsan oo u dhexeeya booliiska iyo beelaha ku sugan Gaarisa, u kuu galayaasha ayaa leh.
2013-06-03 Kadib lix sano markii ciidamada AMISOM lasoo daad gureeyay, ayaa shacabka Muqdisho iyo magaalooyinka kaleba waxa ay ammaanayaan ciidan gobaleedka kaalmadooda ah in ay wiiqeen jiritaanka al-Shabaab.
Shacabka Muqdisho oo soo dhoweeyay, balanna ku qaaday in ay ilaalinayaan nalalka waddooyinka ee qoraxda ku shaqeeya
2013-06-03 Maamulka gobolka Banaadir ayaa ka shaqaynaya in ay houmariyaan ammaanka, iyaga oo waddooyin badan nalal galinaya, dadkana ku wargalinaya muhiimadda ay leedahay in ay alaabtaas ay ilaaliyaan.
Ammaanka tuulooyinka xuduudka dhaca ee Kenya oo la xoojiyay kadib weerarkii bilayska
2013-05-28 Mas'uuliyiinta Kenya ayaa ku boorriyay muwaaddiniinta in ay ka feejignaadaan khatar laga yaabo ina y ka soo fool-leedahay dhexdooda iyadoo xukuumadda ay ka shaqaynayso in ay xoojiso ammaanka Gaarisa kadib weerarkii fasaxii todobaadka.
2013-05-23 Kadib markii muddaaharaadayaashu burburiyeen buundo, oo ay gubeen guyo iyo xafiisyada xisbiga talada haya ee ku yaala Mtwara, ayuu Wasiirka Arimaha Gudaha Emmanuel Nchimbi u sheegay baarlamaanka in ay waajib tahay in tallaabo la qaado.
Afhayeenka AMISOM oo dafiray tirada khasaaraha nafeed, isagoo daaha ka rogay qorshayaasha muddada dheer
2013-05-22 Wareysi gaar ah oo ay Sabahi la yeelatay, ayuu Afhayeenka Howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya Gaashaanle Sare Cali Aden Xumad kaga hadlayaa sida AMISOM ay Soomaalida uga gacan siinayaan nabadda iyo dagganaashaha.
2013-05-21 Iyada oo ay soo kordhayaan shaqaaqooyinka xuduuda, ayaa Gobolka Mandheera uu raadinayaa wada shaqayn ka timaada madaxda iyo hoggaamiyayaasha waddamada Kenya, Itoobiya iyo Soomaaliya.
2013-05-21 Xukuumadda ayaa ka shaqaynaysa in ay nadiifiso waddooyinka Muqdisho ku xira Marka iyo Baydhaba si ay muwaaddiniinta ugu safraan iyaga oon caqabado kala kulmin xubnaha maleeshiyaadka.
Dadka Muqdisho oo feejigan kadib silsilado weerarro ah oo ay al-Shabaab gaysatay
2013-05-07 Muwaadiniinta ayaa madaxda ammaanka ee magaalada gacan siinaya, iyagoo usoo warinaya tallaabooyinka shakiga keeni kara, iyo agabyada meelaha looga tago ee ayan cidina la joogin.
2013-05-06 Madxaweyne Jakaya Kikwete ayaa amray ciidamada in ay si toos ah ula dagaallamaan ugaadhsiga sharci darrada ah, iyada oo Beeraha Qaranka Tansaaniya ay caddeeyeen qorshooyin ah isticmaalka diyaaradaha aan qofna wadin.
2013-04-23 Bertrand Bisimwa, oo ah madaxa qeybta siyaasadda ee Dhaqdhaqaaqa kooxda mucaaradka ah ee 23-ka Maarso (M23), ayaa Tansaaniya uga digay inuu dhici doono 'xasuuq' haddii ay ka qeyb qaadato guutada fara-gelinta Qaramada Midoobay.
Dadka deegaanka waqooyi bari Kenya waxa ay muhiim u yihiin dagaalka looga soo hor jeedo rabshadaha
2013-04-23 Kadib markii ay soo laa laabteen weerarada al-Shabaab iyo markii la ogaaday foojignaan la'aanta saraakiisha ammaanka, ayay hoggaamiyayaasha maxaliga ahi waxa ay riixayaan in dadka kasoo jeeda waqooyi bari ay dowr weyn ku lahaadaan ammaanka.
Haween ka tirsan qurba-joogta Soomaaliyeed oo waddanka ku soo noqonaya si ay ganacsi u bilaabaan
2013-04-22 Haweenka ganacsatada ah ayaa ka faa'iidaysanaya kabashada ammaanka iyaga oo ku soo noqnaya Soomaaliya si ay dukaan u furtaan isla markaana fursado shaqo uga abuuraan Muqdisho.
Muqdisho oo bilawday waardiye xaafadeedka
2013-04-19 Dadka dagan siddeed xaafadood oo caasimada Soomaaliya ah ayaa ku shaqeeynaha indhaha iyo dhagaha, iyaga oo maamulka Banaadir gacan ka siinaya la socoshada khatarta argagixisada ama dhaqdhaqaaqyada kale ee laga shakin karo ee ka dhacaya xaafadahooda.
Soomaaliya oo horumarinaysa dib u dhiska ciidamada, balse caqabado ayaa wali jira
2013-04-17 Daacad u ahaanshaha qabaa'ilka ayaa majaxaabinaya dadaalada xukuumadda Soomaaliya ay dib ugu dhisayso ciidamada qaranka iyo hay'adaha kale ee ammaanka inay lahaadaan hal hoggaan oo midaysan.
Hay'adaha gargaarka oo shaqooyinkooda dib uga bilaabay Kismaayo balse caqabado ayaa wali jira
2013-04-02 Ururrada Soomaalida ayaa gargaar ka wada Kismaayo balse dadkeeda ayaa u baahan gargaar toos ah in ay ka helaan hayádaha gargaarka caalamiga ah.
Qawlaysato hore oo nolol cusub oo beeralaynimo ah ka bilaabay Nairobi
2013-03-28 Laba-boqol oo xubno qawlasato hore ah, kuwaas oo xaafadaha Nairobi cabsi wayn ku hayn jiray, ayaa noloshoodii u baddalay in ay ku abuuraan midhaha macaan iyo khudaar meelaha isku raranta ah ee magaalada.
Madax goboleedyada Soomaaliya oo ka cabsi qaba ka bixitaanka Itoobiyaanka oo baaxad leh
2013-03-26 La dagaalanka al-Shabaab, ayay ciidanka Soomaaliya yihiin kuwo aan si fiican u qalabaysnayn oo aan baddali karin ciidamada Itoobiyaanka ah haddii ay ka baxaan qaybo kale oo Soomaaliya ka mid ah, madaxda maamul goboleedyada ayaa sidaas leh.
Soomaaliya oo fududeeyntii xayiraadda hubka kala kulmi doonta caqabado iyo fursado cusub
2013-03-12 Go'aankii Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ee sida ku meel gaadhka ah looga fududaynayay cunaqabataytii hubka ee Soomaaliya ayaa xukuumadda siinaya fursad ay ku xaqiijin karto in ay dhisi karto ciidan hubaysan oo midaysan oo dadka matali kara.
2013-03-04 Ardayda jaamacadaha ka soo qalin jabiyay ayaa sheegaya in hadda ay shaqeyn karaan iyaga oon ka cabsi qabin in laga aar guto, ayna heli karaan shaqooyin ku salaysan aqoon halka lagu siin lahaa eex qabiil.
2013-03-01 Madaxda Kitistaanka iyo Muslimiinta ayaa sameeyay madal kulmisa diimaha kala duwan si ay wax uga qabtaan rabshadihii dhawaanta dhacay isla markaana isu soo dhaweeyaan masaafada labada bulsho u dhaxaysa.
Xafladaha dhaqanka oo mar kale Muqdisho ku bulaaley
2013-02-26 Muddo sanado ah xafladaha Suufiyada iyo kuwa kale ee asalka ah waxaa mamnuucay al-Shabaab, balse hadda dib ayaa looga wada arkayaa caasimadda Soomaaliya iyadoo dadka deegaanka ay kusoo laabanayaan dhaqankooda.
Xeryaha guur guura ee dadka waddanka gudihiisa ku barakacay oo carqaladaynaya horumarka Muqdisho
2013-02-21 Dadka xuquuqda u dooda ayaa sheegaya in dawladdu ay tahay in ay wax ka qabato xeryahan aan qaabaysnayn, kuwaas oo ku keeni kara khatar dhinaca caafimaadka iyo ammaankaba ah dadka waddanka gudihiisa ku barakacay iyo shacabka kale ee magaalada deggan.
Xayiraadda hubka ee wali saaran Soomaaliya oo halis ku ah guulaha ammaan ee Soomaaliya
2013-02-20 Madax iyo khubaro militari oo Soomaaliyeed ayaa sheegaya in qaadidda cuna-qabataynta hubka ay lagama maarmaan u tahay la dagaalanka al-Shabaab iyo ilaalinta madax-banaanida dalka.
Dawladda hoose ee Muqdisho oo dib uga bilaabaysa waddooyinka waawayn rakibka nalalka tamarta qoraxda ku shaqeeya
2013-02-20 Dawladda Soomaaliya ayaa mashruuc ay ku sameeyaan nalalka tamarta qoraxda ku shaqeeya ka wada waddooyinka waawayn ee Muqdisho, waana tallaabo dadka habeenkii ganacsada ay soo dhaweeyeen.
2013-02-19 Isku dhac u dhexeeyay Muslimiinta iyo Masiixiyiinta oo ku saabsanaa gawraca xayawaanka ayaa ka qarxay degmada Buseresere usbuucii hore, taas oo ku kicisay madaxda in ay ku fikiraan in xanibaadaha qaar ay qaadaan.
2013-02-04 Dawladda Soomaaliya ayaa ka shaqaynaysa sidii ay dib ugu dhisi lahayd xeryaha milatariga iyo xeryaha kaleba si ay u qalabayso ciidamadeeda uguna tababarto waddanka gudihiisa.
200 oo saraakiil booliis Soomaali ah oo tababar ku qaadanaya Jabuuti
2013-02-01 Saraakiisha ayaa baranaysa farsamada baadhitaanka, ka hortaga danbiga iyo hannaanka uu garsoorku u maro su'aalaha ka hor inta aan la gaynin meelaha dhawaanta laga xoreeyay al-Shabaab.
2013-01-28 Magacaabidii bishaan ee xisbiyada ayaa waxaa ka dhashay rabshado iyo eedeymo musuqmaasuq, taa oo nasiib-darro ku ah doorashooyinka guud ee March.
Khidmada Duurjoogta Keenya oo ku rakibtay qalab shanqar bixiye ah aaga duurjoogta lagu xanaaneeyo si loo bajiyo ugaadhsiga sharci darada ah
2013-01-25 Hay'ada ayaa talaabooyin u qaadaysa sidii ay hugaajin lahayd awoodeeda iyada oo maroodiyayaal iyo wiyil badan la dilo si loogu kordhiyo suuqa sharci darada qasoodiga ah.
Ciidamada Soomaaliya oo adkeeyay ammaanka Muqdisho
2013-01-22 Hawgalda ammaanka ee socda ayaa looga golleeyahay in caasimadda looga qaado waxyaabaha qarxa iyo hubka sharci-darrada ah, lagu joojiyo weerarrada argagixisada ah iyo in Muqdisho ay ku soo noqoto xaalad caadi ah.
Dhalinyarada ka soo jeeda isku raranka Kenya oo xafladaha bulshada u adeegsanaya in ay yareeyaan khillaafka qabaailka
2013-01-18 Hogaamiyayaasha dhalinyarada ayaa sheegaya in waayadii hore siyaasiyiintu ay khliaafaadka qabaailka ay u adeegsadeen in ay awood helaan, laakiinse dadaalkan cusub ayaa hadafkiisu yahay in ayy shacabka u sheego in ay talaabo qadaan in ay ahmiyad siiyaan dhinaca siyaasada intii ay siin lahaayeen qabiil aqoonsiga.
Qurbo joogta dib u soo noqonaya oo khilaaf xaga dhulka ah ka dhaliyay Muqdisho
2013-01-17 Garsoore Banaadir ku sugan ayaa sheegaya in maxkamadiisu ay si xad lama filaan ah u diiwaan galinayso kiisaska dhulalka la isku haysto, iyada oo ay dadka qaar isku dayayaan in ay ka faaiidaan dukumentiyo been ah oo lahaansho dhuleed ah.
Dawladda hoose ee Muqdisho oo iibsatay gawaadhi cusub oo dab damis ah
2013-01-16 Gawaadhida cusub waxay wax ka tari doonaan la dagaalanka dabka ee caasimada, taas oon muddo sanado ah lahayn awood ku filan oo ilaalisa guryaha dadwaynaha iyo ganacsiga.
2013-01-08 Ciidamada isbahaysiga ayaa isku diyaarinaya weerar si ay dib ugu qabsadaan Baardheere, oo ah magaalo istiraatiiji ah oo dad badan ay aaminsanyihiin in ay muhim u tahay waddada ay sahaydu u soo marto al-Shabaab ee koonfurta Soomaaliya.
Dawladda hoose ee Muqdisho oo mashaariic waawayn oo dib-u-dhis ah fulinaysa
2012-12-28 Dawladda hoose ayaa Muqdisho oo dhan ka dhaqan galinaysa ku dhowaad $10 milyan oo mashaariic ah, kuwaas oo ay ku jiraan dib-u-dhiska garoomada ciyaaraha, laydhadhka jidadka oo la galinayo iyo xafiisyo la dhisayo.
Ciidamada Soomaaliya oo xoojinaya howlgallada kadhanka ah al-Shabaab ee gobolka Hiiraan
2012-12-26 Ciidamada Qaranka Soomaaliya iyo ciidamada isbahaysiga ayaa isu diyaarinaya in ay weerar ku qaadaan maleeshiyaadka al-Shabaab ee ku dhuumaalaysanaya tuulooyinka iyo magaalooyinka koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya,
2012-12-24 Dowladda ayaa samaysay guddi-howleed loo xil saaray in ay xal u helaan weerarrada argaggixisada ee xiriirka ah ee ka dhaca xaafadda Eastleigh ee Nairobi.
Dagaallo sokeeye oo ku soo noqday meelihii laga xoreeyay al-Shabaab
2012-12-18 Iyada oo ay al-Shabaab sii luminayaan meelihii ay ka heysteen badhtamaha iyo koonfurta Soomaaliya, ayaa diyaaradda dalka ee African Airlines billowday in ay bixiso duulimaadyo tagaya meelaha la xoreeyay.
Ammaankii oo ku soo noqday Beledweyne markii ay ciidamada Jabuuti la wareegeen
2012-12-13 Dilalka aan maxkamaddu guddoomin ayaa ahaa wax si maalinlle u dhow uga dhaca Beledweyne xilligii ay ka talinaysay al-Shabaab, laakiin hadda magaaladu waa mid ilaa xad ammaan ah kadib markii ay ciidmada Midowga Afrika ay sugeen ammaanka magaalada.
2012-12-12 Xorreynta Jowhar, oo mar al-Shabaab u aheyd magaalo ay si wayn ugu tiirsan tahay dhaqaale iyo istiraatiiji ahaan, ayaa jaraysa galaangalka ay kooxda u leedahay bartamaha Soomaaliya.
Soomaalida Kenyaanka ah oo ku boorinaya booliiska, iyo shacabkaba in ay joojiyaan jinsi soocida
2012-12-05 Dadka ka soo jeeda qowmiyadda Soomaalida ayaa sheegaya in inta badan si khlad ah loogu shaabadeeyo in ay yihiin kuwo al-Shabaab niyada kala jira, ayna la kulmaan dhibaatayn kaga timaada qowmiyadaha kale iyo ciidamada amaanka ee Kenya.
Dadka reer Muqdisho oo soo dhaweeyay qaadistii isbaarooyinka sharci darrada ahaa
2012-12-04 Dadka ayaa sheegaya in qaadistii isbaarooyinka sharci darada ahaa ay fududaynayso, ammaanna ka dhigayso in la isaga kala goosho magaalada, balse ay tahay in ilaalo la meel dhigo si looga hor tago in aanay dib u soo laaban.
Tansaaniya oo isku diyaarinaysa inay fara-galiso khilaafka DRC
2012-12-04 Tansaaniya ayaa Qaramada Midoobay ka sugaysa amar u fasaxaya inay ciidan ka qeyb qaata dadaallada nabad-ilaalinta u dirto Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo.
Shacabka oo kaalmaynaya in Muqdisho laga nadiifiyo hadhaaga al-Shabaab
2012-11-27 Wadashaqaynta ka dhaxaysa shacabka iyo ciidamada ammaanka ayaa keentay in la qabto xubno al-shabaab ah iyo la wareegida khasnado hub ah.
Kenya oo baaraysa howlgalkii ciidamada ee Gaarisa
2012-11-21 Askar ka timid xero millateri oo aagga ka dhow ayaa garaacay dad rayid ah waxayna burburiyeen goobo ganacsi iyagoo kaga aar-gudanaya dhimashada saaxiibbadood ay dileen rag hubaysan oo aan la garan.
Kenya oo adeegsanays ciidanka, guddina u saartay baaraanka weerar gaadmo ah oo bilayska lagu qaaday
2012-11-14 Iyadoo maydadkii saraakiishii bilayska ee la dilay loo soo gudbiyay Nairobi, ayay xukuumaddu samaysay guddi baaritaan ku sameeyay meesha ay wax ka khaldameen.
Midowga Afrika oo ku tababaraya bilayska Soomaalida baarista dambiyada
2012-11-01 Mas'uuliyiin ayaa sheegaya in tababarkani uu hubin doono in bilayska Soomaaliya loo diyaariyo sidii ay mas'uuliyadda ammaanka ugala wareegi lahaayeen AMISOM.
Kenya oo bilawday barnaamij cusub oo ammaanka waddooyinka ah
2012-10-25 Qaybaha sida khaaska ah loo leeyahay ayaa hor socda barnaamij cusub oo ammaanka waddooyinka ah si loo xakameeyo tirada dhimashada shilalka iyo burburka hantida ee wadanka oo dhan.
2012-10-24 Waxbadan ayaa iska beddelay markii dhulka beeraha ee ku yaalla jiinka wabiga Shabeelle ay maamulaysay al-Shabaab beeralaydana ay ku khasbaysay inay maal-galiyaan dhaq-dhaqaaqooda argagixisanimo.
Isu socodka Soomaaliya iyo Kenya oo kordhay amaanka oo fiicnaaday darteed
2012-10-24 Duulimaadka dhawaantan kordhay ee Soomaaliya iyo Kenya ayaa calamaad u ah in uu ammaankii soo fiicnaaday iyo in fursado maalgashi ay ka jiraan Soomaaliya.
Bilayska Garissa oo dhaqan-galinaya dib ugu celinta qaxootiga xerayaha Dhadhaab.
2012-10-23 Mas'uuliyiinta ayaa wada baaritaano guri-ka-guri ah, si ay u dhaqan-galiyaan amarkii ahaa in qaxootiga sida sharci-darrada ah ugu nool goobaha magaalooyinka ah dib loogu celiyo xeryaha loogu talagalay.
Ciidamada xooga Soomaliya oo fulinaya qorshe cusub oo nabadda loogu sugayo magaalada Muqdisho
2012-10-17 Qorshahan cusub, Ciidamada xooggu waxay badinayaan socod kormeerka iyo baaritaanka si loo cirib jaro al-Shabaab inta ka hartay oo magaala madaxda isku qarinaya.
Xarunta Bilayska Gaarissa oo bas beeshay, baaris ayaa la billaabay
2012-10-03 Warbixinno horudhac ah ayaa sheegaya in dabku uu ka dhashay cillad ku timid fiilada dabka korontada laga qaato, maalmo uun kaddib markii weerarro xiriir ah oo al-Shabaab lagu tuhmay lagu bar-tilmaameedsaday bilays jooga Gaarissa.
2012-10-02 Haweenka Keenya ee dagan degmada Wajeer oo diinta iyo kulankooda bil laha ah u adeegsanaya in ay kaga hor tagaan xag jirnimada.
Dowladda Kenya oo hoteelada Gaarisa digniin ku siisay in ay u hoggaansamaan shuruudaha ammaanka
2012-10-01 Hoteelada qaar ayaa faa'idada ka door biday ammaanka, balse dowladda ayaa sheegaysa in ay shatiga kala laabanayso haddii aysan u hoggaansamin shuruudaha.
Keenya oo ammaanka adkaynaysa waxna ka qabanaysa soo galinta hubka sharci darada ah
2012-09-27 Hay'adaha amaanka ee Keenya oo si wadajir ah u shaqaynaya si ay si habsami ah u ilaaliyaan xuduudka ayna u joojiyaan hubka sharci darada ah soo galitaankiisa.
Dadka Bariga Afrika oo cambaareeyay rabshadihii looga jawaabay filimkii Islaamka ka dhanka ah
2012-09-26 Bulshada rayidka iyo hoggaamiyayaasha diimaha ee ku sugan Kenya iyo Tansaaniya ayaa sheegay in rabshad aanay waxba taraynin marka cabasho la soo bandhigayo, balse taa waxaa ka faaiidaysanaya dadka xag jirka ah ee labada dhinac.
Kenya oo kordhisay sugida ammaanka kadib markii ay dagaal yahaniintu soo saareen hanjabaadyo
2012-09-21 Xarunta Dhalinyarada Muslimiinta oo la jaal ah al-Shabaab ayaa ku hanjabtay in ay "sidii la rabay uga jawaabayso" hadii ciidamada AMISOM ay weeraraan Kismaayo.
Keenya oo xidhaysa teleefoonada gacanta oo aan sharciga ahayn iyo kuwa been abuurka ah
2012-09-20 Dawlada ayaa doonaysa in ay xamakayso teleefoonada gacanta ee aan diiwaan gashnayn kuwaas oo keeni kara khatar xaga amaanka ah kuna xad gudbaya xuquuqda lahaanshaha ee kuwa sameeya.
Dadka loo magacaabay guddiga bilayska ayaa sare u qaaday rajada laga qabo in si nabad ah ay u dhacaan doorashooyinka Kiinya
2012-09-19 Dib u dhac dheer kadib, barlamaanka Kiinya ayaa laga filayaa inay ansaxiyaan dadka loo magacaabay guddiga cusub, kaasi oo kor ka maareeyn doona ciidamada bilayska.
2012-09-18 Dadka degaanka ayaa ku andocoonaya in xukuumaddu aysan samaynin dadaal ku filan oo ay ku joojiso rabshadaha, halka dowladdu ay sheegayso in ay la daalaa dhacayso caqabado farabadan oo ah ammaanka gudaha iyo dibaddaba.
2012-09-17 Kooxda al-Qaacida ku xiran ayaa isku dayay in ciidamada caalamiga ah ay u sawiraan in ay yihiin kuwo kusoo duulay Soomaaliya, taasi oo la micno ah in ay kalsooni galiso dagaalyahanadeeda oo wajahaya guul darrooyin is daba joog ah.
Dagaal yahaniinta al-Shabaab oo khajilsan ayaa isu soo dhiibaya ururada sirdoonka Soomaaliya
2012-09-12 Iyaga oo ka caal waayay dhibaataynta dadka aan waxba galabsanin iyo u adeegsiga caruurta ciidan ahaan, ayaa dagaal yahaniinta al-Shabaab si xawli ah isugu soo dhiibayaan dawlada Soomaaliya.
Cawayska habeenkii oo ku soo laabanaya Muqdisho, iyadoo amnigu uu soo hagaagayo
2012-09-10 Dadka deegaanka ayaa sheegaya in ay hadda dareemayaan ammaan markay habeenkii u soo baxaan maqaayadaha, goobaha internetka, shaleemooyinka iyo meelaha kale ee ay bulshadu isugu timaado.
Qabaa'ilka Kenya oo adeegsanaya diyo bixin si ay u dajiyaan dagaalada, balse xal waara ayaa loo baahanyahay
2012-09-07 Falanqeeyayaal ayaa sheegaya in dhaawacyada hantiyadeed ay gacan ka gaysan karaan in ay yareeyaan colaadaha qabaa'ilka, balse dowladdu waxa ay u baahantahay in ay daweyso gaabsiga kheeyraadka dabiiciga ah si xal loogu helo asalka sababta colaadaha.
Wajeer Center oo loo aqoonsaday xarunta hogaaminta ee xalinta khilaafaadka
2012-09-05 Shacabka iyo wakiilada dawladda oo ka kala imaanaya adduunka oo dhan ayaa u socda Gobalka Waqooyi bari ee Keenya si ay u bartaan nabad wada noolaashaha bulshooyinka.
Laas Caanood oo musaafurinaysa dad Soomaali Koonfureed ah oo lagu eedeeyay al-Shabaab
2012-09-05 Maamulka Sool ayaa u qabtay shaqaale kasoo jeeda Koonfurta Soomaaliya ilaa September 12-keeda in ay kaga tagaan magaalada, taasi oo saamaysay dareenka dhibanayaasha.
Wariyayaasha Soomaaliyeed oo shaqadooda sii wata in kastoo ay halis tahay
2012-08-31 Xagjirayaasha ayaa wali wada cabsi galinta wariyeyaasha ku sugan Soomaaliya maadaama ay u sahlaan muwaadiniinta inay ogaadaan 'xaqiiqda ka dambaysa waxa ka jira wadanka".
Liiska iyo xiliga: weerarada bambaanooyinka iyo kuwa miinooyinka ee Kenya ka dhacay
2012-08-30 Tan iyo markii Ciidamada Difaaca Kenya ay Soomaaliya galeen bishii Oktoobar si ay ula dagaalamaan kooxda al-Qaacidda la ologga ah ee al-Shabaab, Kenya ayaa la taahaysay weeraro argaggixiso.
2012-08-29 Kadib laba cisho oo rabshado ah, bilayska ayaa soo celiyay daganaashiyihii magaalada, iyadoo hoggaamiye diimeedkuna ay mu'miniinta waydiisteen in ay ka fogaadaan dagaal kooxeed.
Howl diimeedka Suufiyada oo dib uga bilowday aagagga al-Shabaab laga xorreeyay
2012-08-23 Kadib markii al-Shabaab laga saaray Muqdisho sanadkii hore, Suufiyada, oo ku faana in ay yihiin nabad-doono, ayaa awood u yeeshay in ay dib u muujiyaan shacaa'irtooda.
Madaxda Kenya oo shacabka ku tirtirsiiyay in ay la shaqeeyaan ciidamada ammaanka si argaggixisada loola dagaalamo
2012-08-14 Qof kasta dawr uu qaadan karo ayaa jira si loo xakameeyo aragaggixisanimada iyo dhibaatada, Sii hayaha Wasiirka Amniga Gudaha Yusuf Haji ayaa sidaas leh.
Shacabka Muqdisho oo u dabaal dagaya ammaanka iyo horu'marka hal sano kadib al Shabaab
2012-08-07 Dadka daggan magaalada ayaa ku dabaal dagay waddooyinka magaalada Agoosto 6-deedii, iyaga oo sanad-guurada halka sano u arkay mid muhiim u ah taariikhda Soomaaliya.
Ciidamada Soomaaliya oo u dhaqaaqay Buur-hakaba iyo Diinsoor
2012-08-06 Iyadoo ay taageerayaan ciidamada Itoobiya, ayay ciidamada Soomaaliya waxa ay qorshaynayaan in ay qabsadaan labada magaalo ee istiraatiijiga ah.
Muslimiinta iyo Masiixiyiinta Kenya oo dhiirri-galinaya nabadda inta lagu jiro bisha Ramadaan
2012-08-03 Muslimiinta ku nool gobolka Waqooyi-Bari ayaa masiixiyiinta ku marti-qaadayay afurka, taasi oo tusinaysa in bulshada ay meel ugasoo wada jeeddo hanjabaadaha al-Shabaab, hoggaamiyayaasha labada diimood ayaa sidaa leh.
Unugta bilayska gurmadka deg-degga ah ee Daraawiishta oo dib looga furay Muqdisho
2012-07-31 Unugta bilayska ayaa la shaqeyn doonta militariga iyo hay'adaha sir-doonka si loo baadi goobo meelaha ay al-Shabaab ku dhumaalaysanayaan iyo xarumahooda.
Ciidamada huwanta oo burburiyay sedex saldhigg oo al-Shabaab ay ku lahaayeen Gedo
2012-07-24 Ciidamada Soomaaliya iyo kuwa Midowga Afrika ayaa dilay 13 al-Shabaab ka tirsan, waxa ayna ka qabsadeen hub aad u tiro badan iyo walxaha qarxa.
Saraakiil Ammaanka ah iyo hoggaamiyayal bulsho oo awooddooda u mideeyay la dagaallanka al-Shabaab
2012-07-23 Odeyaal bulsho, hoggaamiyayaal diin, dumar iyo dhalinyao ayaa lagu daray gudiga cusub ee ammaanka gobolka Waqooyi-Bari, si ay gacan uga gaystaan dagaalka lagula jiro hanjabaadaha a-Shabaab.
Gobalka Waqooyi-Bari oo u midoobay ka soo horjeedsiga al-Shabaab
2012-07-17 Shacabka reer Gaarisa oo isku duuban si ay u dhawraan nabada iyo ammaanka, iyaga oo balanqaadaya in aysan u ogalaanin weerarada al-Shaabab in ay hakiyaan nolol maalmeedkooda.
2012-07-16 Saraakiil xagga amniga ah ayaa leh qabsashada Laanta Buuro waaxa ay wadada u xaarreysaa in la qabsado inta ka dhiman gobolka Shabeelaha Hoose ee ay al-Shabbaab ka taliyaan.
2012-07-13 Howl-galka wada jirka ah ayaa lagu soo xiray in-ka-badan 500 oo looga shakisanyahay in ay ahaayen xubno ka tirsan kooxdaas.
2012-07-12 Barnaamijkan ayaa shardi ka dhigay dadka u dhashay Tansaaniya iyo kuwa ajaanibta ahba ee dagan waddanka ilaa lix bilood in ay is diiwaan- galiyaan, waraaqaha aqoonsigana qaataan.
Dagaalyanada Al- Shabaab oo "si xawli ah isugu soo dhiibaya" Puntland
2012-07-11 Xubno badan oo al-Shabaab ah ayaa is dhiibya, sababta oo ah waxay garawsadeen in in aysan jirin wax diin ah oo banaynaysa in dadka loo dilo kala sooc la'aan, sarkaal sare oo Puntland ah ayaa sidaas sheegtay.
2012-07-05 Ammaanka oo soo hagaagaya ayaa soo jiitay in dalxiisayaashu ay kusoo laabtaan xeebaha caanka ah ee Muqdisho, balse kaabayaasha wali si buuxda looma dayac-tirin kadib tobonaan sano oo dagaalo iyo qax ah
Jabkii al-Shabaab oo ammaankii ku soo celisay Hiiraan, Baay iyo Bakool.
2012-07-03 Markii ay Ciidamada Soomaaliya iyo kuwa huwantu la wareegeen magaalooyinka gobolada, ayaa nolol maalmeedkii uu si caadi ah ku soo noqonayaa, in kasta oo dadka deegaanku ay wali u baahan yihiin in nolol maalmeedka daruuriga ah laga kaalmeeyo.
Hay"adaha qaxootiga oo Gargaarka ka joojiyay xeryaha Dhadhaab kadib af-duubyo dhacay
2012-07-02 Kadib markii afar shaqaaale gaargaar la af-duubaay todobaadki hore, hay'adaha gargaarka waxa ay yareeyeen howlahooda, iyadoo dadka qaxootiga ahna ay sameeyeen muddaaharaad ka dhan ah colaadda.
2012-06-29 Kumanaan kun oo Soomaali ah oo dalkoodii uga soo cararay ururka argagixisada ah ee al-Shabaab, ayaa wali waxa daba-socda shiddadii iyo colaaddii al-Shabaab.
2012-06-28 Qabsashada Balcad oo xukunka al-Shabaab ku hoos jirtay sedexdii sano ee lasoo dhaafay ayaa waddada u xaarraysa in la qabsado magaalada Jowhay oo ah caasimad goboleedka Shabeellaha Dhexe.
Afgooye oo caadi kusoo noqonaysa kadib sannado ay al-Shabaab xukumayeen
2012-06-22 Wax soo saarka magaalada ayaa dib u soo noqonaya kadib markii ciidamada Somaaliya iyo kuwa la jaaalka ah ay al-Shabaab ka xoreeyeen magaalada.
2012-06-15 Mas’uuliyiinta ayaa ka dalbanaya macallimiinta in ay dib u bilaabaan shaqadoodii kadib markii la wanaajiyay ammaankii maagaalooyinka ku yaal xudduudda ee ay al-Shabaab dhowr jeer weerartay sannadkii hore.
2012-06-13 Ciidamada bilayska waddooyinka ee loo yaqaan taraafikada ayaa ku soo noqday waddooyinka Muqdisho si ay u guttaan "waajibkoodii xirfadeed iyo koodii qaran isla markaana u soo celiyaan kala dambayntii."
Ciidamada Soomaaliya iyo kuwa huwanta oo Kismaayo ku hareeyay al-Shabaab
2012-06-05 Al-Shabaab ayaa waxa si joogta ah faraheeda uga baxaya dhulalkii ay ka talin jirtay iyada oo ay ciidamada Soomaaliya iyo kuwa huwantuna qorsheeynayaan olole dheeraad ah oo ay kooxdan ku xiran al-Qaacida uga xaaqayaan Bariga Afrika.
Bilayska Wajeer oo kordhiyey gaaf-wareeggooda amniga ah wax yar ka hor dhamaadka toddobaadka feestada ah
2012-06-01 Ka dib weerarkii labaad oo bambaano ah oo dhaca toddobaad gudihiis, ayay maamulku dadka rayidka ah ku boorrinayaan in ay digtoonaadaan oo ay bilayskana kala shaqeeyaan in amniga guud ee bulshada la sugo.
2012-05-29 Lumintii ay al-Shabaab lumiyeen Afgooye ayaa kala goynaya meeshii ay al-Shabaab ay sahaydu u marin jirteen dagaalyahannadooda sii kala firxanaya, iyadoo niyad-jabinaysa dagaalyahanada, sidaa ayay leeyihiin falanqeeyayaasha iyo saraakiisha milliteriga
2012-05-18 Dawladdu waxay rabtaa ciidan qaran oo awood leh si uu uga hortago khataraha ka imanaya kooxda xiriirka la leh al-Qaacida ee al-Shabaab.
2012-05-11 Haweenka ayaa u jeestay xirfadaha dhinaca bilayska si ay u ilaaliyaan dalkooda ayna iskaga celiyaan dacatiyada ay al-Shabaabku dadka kula kacayaan.
Ahlu Sunna wal Jamaaca oo wacad ku maray inay cirib-tirayaan al-Shabaab
2012-04-04 Kooxda malleeshiyada ee ASWJ ayaa sheegtay inay ka hortagayaan dhaq-dhaqaaqa xiriirka la leh al-Qaacida iyagoo taageero ka helaya dawladda.
2012-04-03 Bilayska ayaa sheegay inay baarayaan qaraxyadii dhimashada sababay ee ka dhacay degaanka Mombaasa, halka ay ka xoojinayaan ammaanka iyadoo ay soo dhowdahay ciidda Easter-ku.
Masuuliyiinta dhinaca ammaanka ee xeryaha Dhadhaab oo bandoow soo rogay
2012-03-27 Bandooga waxaa loogu talo galay in lagu xakameeyo rabshadaha kaasi oo qofkasta saamayn doona marka laga reebo shakhsiyaadka ku hawlan hawlaha ammaanka iyo caafimaadka, sida ay sheegeen masuuliyiintu.
2012-03-23 Ciidamada isbahaysiga ee Soomaalida iyo kuwa Itoobiya ayaa xoreeyay magaalada Xudur, taasi oo ah calaamad muujinaysa in al-Shabaab ay ku dhowdahay in ay jabto, sida ay sheegeen dadka siyaasadda gorfeeyaa.
Chirchir oo ka hadlay millitariga Kenya iyo dagaalka warfaafineed ee al-Shabaab
2012-03-20 Gaashaanle Emmanuel Chirchir ayaa u isticmaala Twitter-kiisa in uu muwaadiniinta ku gaarsiiyo howl-gallada Ciidamada Difaaca Kenya ee ka socda Soomaaliya iyo sidoo kale in uu uga jawaabo dacaayadda al-Shabaab.
Shaqaalaha gargaarka degdegga ah ee Muqdisho ayaa naftooda halis u galiya si ay u badbaadiyaan dad kale
2012-03-15 Samafalayaasha gargaarka degdegga ah ee caafimaadka ayaa ku dhex shaqeeya xaalado khatar ah, oo markarka qaar waajaha is-rasaasayn iyo qaraxyada la dhigo waddada dhinaceeda, si ay dadka dhaawacmay iyo kuwa buka u keenaan isbitaalka.
2012-03-09 Dadka falanqeeya arrimaha ammaanka ayaa sheegay in sida ugu wanaagsan ee la iskaga ilaalin karo al-Shabaab ay tahay sii wadidda feejignaanta dadka shacabka ah iyo dawladda.
2012-03-05 Ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ayaa qabsaday gacan-ku-haynta meeshii ugu dambaysay ee ay caasimadda xoogga uga lahaayeen al-Shabaab
2012-03-01 Nin ayaa Sabahi uga sheekeeyay sidii ay al-Shabaab u qoratay ciidan ahaan, iyadoo bilaysku hoggaamiyayaasha diinta ka baarayaan xiriir ay suurta-gal tahay inay la leeyihiin kooxaha xag-jirta.
Ciidamada ammaanka ee Kenya oo loo hawlgaliyay inay ka hortagaan dhalinyarada xagjiriinta laga dhigayo
2012-02-28 Waxaa suurta-gal ah in midowga al-Shabaab iyo al-Qaacida uu kooxda argagixisada ah siiyo awoodda ah inay qortaan dhalinyarada dayacan ee Kenya, sida uu ka digay qof falanqeeya arrimaha ammaanka.
2012-02-27 Xorayntii dhawaan laga xorreeyey Baydhabo iyo weerarradii cirka ahaa ee diley afar ka mid ah dagaalyahaniinta al-Shabaab ayaa muujinaya in ay kooxda xag-jirka ahi ay la sii diciifayso cadaadiska caalamiga ah
2012-02-23 Dadka ku nool xeryaha baracakacayaasha ayaa dawladda ugu baaqay inay ammaankooda si dheeraada ay u ilaaliyaan iyadoo dawladdu ay al-Shabaab ku eedaysay inay bar-tilmaameed ka dhiganayaan dadka shacabka ah.
2012-02-16 Halka ay ciidamada AMISOM iyo kuwa Soomaalidu ay hore ugu sii durkayeen marinka Afgooye, ayay Soomaaliduna isugu soo baxeen jidadka si ay u sameeyaan mudaharaad ka dhan ah al-Shabaab.
Ciidamada bilayska Kenya oo doonaya inay xiriir adag la yeeshaan bulshada Soomaalida ah
2012-02-14 Ciidamada ammaanka ayaa leh taageerada bulshada Soomaalidu waa lama-huraan sifo loola dagaallamo xagjiriinta al-Shabaabta ee ku sugan Kenya.
2012-02-07 Nabad galyada oo ka soo raynaysa aawadeed, qurbo joogta ayaa ku soo laabanaysa magaalada caasimada ah, iyagoo bilaabaya furitaan ganacsi guryahoodiina ku soo laabanaya.
Bulshada caalamka oo culays saaraysa hawlaha ammaaanka ee Soomaaliya
2012-02-03 Booqashadii dhawayd ee Xoghaya Arimaha Dibadda ee dawladda Ingiriiska William Hague uu ku tagay Soomaaliya iyo kulankii Gudiga Wadajirka ee Ammaanka ayaa tilmaamay muhiimadda ay leedahay nabadgalyo ka dhacda magaalada Muqdisho.
Dilkii agaasimaha Idaacad Soomaaliyeed oo si aad ah loo cambaareeyay
2012-01-30 Masuuliyiin iyo saaxiibadii ay wadashaqayn jireen oo dawladda ka dalbaday inay soo xiraan ciqaab adagna mariyaan dhagar-qabayaashii dilay Xassan Cismaan Cabdi, Agaasimihii Warbaahinta Shabeelle.
2012-01-27 Qaramada Midoobay ayaa sheegaysa in ay haatan si dhow ula shaqayn karto hay'adaha Soomaalida ah mar haddii ciidamada huwantu ay al-Shabaab ka saaren Muqdisho. .
Dawladda Tansaaniya oo heegan u ah kooxaha al-Shabaab ee gudaha u soo galaya
2012-01-26 Sarkaal ka tirsan bilayska Tansaaniya ayaa Sahabi u sheegay inay jiraan tallaabooyin lagu sugayo ammaanka si looga hortago inay al-Shabaab soo gasho gudaha Tanzania si ay ula dagaallamaan ciidamada Kenya.
Weerarada Al-Shabaab waxay bar tilmaameed sadaan hay’adaha samafalka iyo dadka qoxootiga ah.
2012-01-25 Weerarada ka dhanka ah shaqaalaha hay’adaha samafalku waxay sii adkaynayaan hawlaha bani aadaminimo iyo in sahaydu gaarto dadka baahan, shaqaale ka tirsan hay’adaha samafalka maxalliga ah ayaa sidaasi yiri.
2012-01-23 Iyada oo al-Shabaab ay cidlaynayaan goobohoodii ay xoogga ku lahaayeen ayna baddalayaan xeeladahooda dagaal, ayay dawladda Soomaaliya ballan ku qaadday inay sii wadaysa dagaalka ka dhanka ah al-Shabaab illaa ay si buuxda u jabinayaan.
2012-01-20 Madaxweynaha Somaliland wuxuu sheegay in maamulkiisu diyaar u yahay inuu wax ka qabto arimaha ammaanka gobolka, laakiin falanqeeyayaashu waxay eegayaan door inta ka ballaaran sifo loola dagaalo argagixisanimada iyo burcad-badeeda.
2012-01-19 Inta badan dadka Kiiniyaanku way taageereen Hawlgalka loogu magac daray Linda Nichi, laakiin cawaaqibta hawlgalkani waa laga dareemay dalka iyadoo la kordhiyay talaabooyinka lagu sugayo ammaanka, dhinaca kalena ay jiraan weeraro xiriir ah oo lagu eedeeyay al-Shabaab.
Masuuliyiinta Puntland iyo hogaamiyayaasha diineed muujiyay sida ay uga soo jeedaan al-Shabaab
2012-01-17 Iyada oo ay jiraan warar sheegaya in ay suurta gal tahay in al-Shabaab ay ku soo jeedo Puntland, hogaamiyayaasha Soomaaliyeed iyo qabiilada ayaa isku abaabulaya inay yareeyaan saamayntooda amaankana ilaaliyaan.